Indonesia in Focus: Ny olona very ny harmonization amin'ny natiora
Ny olona very ny harmonization amin'ny natiora
Ny mitaingina Tsy vita (378) (Fizarana fito-polo amby telon-jato valo), Depok, West Java, Indonezia, Septambra 30, 2015, 3:18 PM). . Teo anelanelan'ny 1960 sy ny taona 1970 somber tanàna, ary ny tanàna manokana eo ambony ny ony Somber wayn ary mbola efitra. Tsy maro ny mponina, na eo an-toerana (Dayak lefona) Bugis sy ny mpifindra monina avy any Java. Mba hahatongavana any amin'ny tanàna upriver na avy any amin'ny tanànan'i New Ulu, Balikpapan matetika ny olona mampiasa kely sambo (amin'ny paddle), ary raha ny renirano indray ny haingam-pandeha fikorianan'ny (noho ny orana) dia maka ny andro vao tonga tao an-tanàna manokana eo ambony 'ny renirano, ankehitriny ny tanàna dia efa miaraka amin'ny tanànan'i Balikpapan, sy ny fidirana lalana efa mora, na miaraka amin'ny fiara kodiarana efatra fiara sy ny môtô. Mponina eo an-toerana dia ankamaroan'ny Dayak zana-tsipika efa lasa nidina ho any hijanona ao an-tanàna manokana eo ambony sy manokana eo ambony Somber wayn. Ny mponina miaina amin'ny fambolena an-tsaha, fa noho ny toe-piainana tany izay matetika mpamboly vary fambolena izay mety ho vokatra ihany indray mandeha isan-taona. Fa matetika ankoatra ny mitombo vary, mpamboly matetika intercrop saha miaraka amin'ny legioma, toy ny kôkômbra, papay, katsaka sy ny mangahazo. Noho izany, raha ny famatsiana ny vary boloky hazo sakafo lany, tantsaha manana sakafo ampy boloky hazo ny mangahazo, katsaka na katsaka vokatra mbola azo avy amin'ny ala, Ankoatra ny voankazo, toy ny papay sy ny voatabiha na iza, ala mbola maro Durian sy rambutan sy Tan (duku ala). Raha trondro sy ny lafiny hafa lovia matetika no mihaza Silamo diera (diera) Dayak antsoin'ny olona hoe brackish, raha ho an'ny mponina eo an-toerana Kaharingan Hindu, ary animsme kristianina izy ireo mihaza diera sy ny kisoa. Mponina Tsy matetika mihaza Python midadasika be sy ny mihantona amin'ny hazo manamorona ny renirano sampana. Izany no antony raha na dia manamorona ny renirano dia maro mahavaly mponina moramora lakana teny sambo avy any ambany ny manokana eo ambony nisesy, dia voalaza hoe: maro no maty ao amin'ny Wrap na namiravira Python dia ny mpihaza (miaramila) Matetika no maty voatifitra ny lohan'ny menarana , Raha trondron-dranomamy no tena velona tao amin'ny ony ny maso na dia afaka mahita, satria ny renirano dia mazava. Mponina matetika matetika hamitahana trondro, na amin'ny alalan'ny fametrahana ny bararata trondro fandrika (antsointsika hoe mampahatsiro sakafo). Ny tantsaha rehefa teo anatrehan'i fambolena vary, tany fambolena raha ny tokony misokatra amin'ny fandoroana ala. Satria raha mazava tantsaha tany amin'ny mifidy fitrandrahana ala (fanary antsy / antsibe) ny roa hektara ny toeram-pambolena tany maka volana maro vao namorona ny roa hektara ny toeram-pambolena tany, kosa raha may, afa-tsy ao anatin'ny vanim-potoana isan-kerinandro. Na izany aza, ny eo an-toerana toy ny efa za-draharaha mpamboly, dia afaka handoro ny ala amin'ny faritra izay azo refesina, raha te hampiasa roa hektara, dia hodorana roa hektara ihany, dia manana fomba doro ala dia tsy nanitatra ka namelatra na aiza na aiza. Noho izany, azo ampiharina amin'ny fiainana an-trano ny tantsaha, na dia ny zana-tsipìka Dayak longhouses mponina eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 lohan'ny tokantrano ao amin'ny trano iray. Ny sakafo isan'andro amin'ny vary (vary / vary) miaraka amin'ny trondro, hena (miahotrahotra) diera, ary isan-karazany ny legioma, toy ny mangahazo ravina sy kôkômbra. Fa mijinja ny tenany izy ireo, ka mitombo nandritra ny taona, alternating eo ny vokatry ny vary, katsaka, mangahazo sy sago, fa fotsiny ihany sepnjang lauknya taona trondron-dranomamy na hena miahotrahotra diera (diera) na ny henan-kisoa (Dayak Kristiana / Hindu Kaharingan) maro an'isa Dayak fivavahana kristianina na Hindu Kaharingan, indrindra fa Dayak zana-tsipika, satria ny maro an'isa monina ao amin'ny amoron-tsiraka distrika zana-tsipìka, matetika any amoron-tsirak'i dia be mifandray amin'ny mpifindrafindra monina niaviany Bugis / Bajau (Sulawesi) dia silamo, maro Dayak zana-tsipika manaraka ny fampianarana ao amin'ny fivavahana ny Bugis / Bajau izany. Satria ny fototra sakafo (foto-tsakafo) mponina dia azo avy any an-tsaha, ary dia azo avy amin'ny ala (sago), dia ny olona tsy mikorontana manodidina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny onjam-fandroahana (fandroahana) mandeha eo amin'ny an-tanàna ny mponina. Radio televiziona indrindra, raha tsy misy, ka dia tanteraka tsy fahampiam-baovao avy any ivelany izao tontolo izao / Tsy nisy fifidianana filoham-pirenena Fuss fampielezan-kevitra, Gunernur, ben'ny tanàna sy ny regents, koa tsy misy tanàna fifidianana, ary dia mbola tsy nisy voatendry ho Lohan'ny ny tanàna, ihany no lohatenin'ny ho mpanapaka ny lohan'ny ny tanàna / tanàna. Tsy mahagaga raha tsy mponina rehetra manana karatra maha-pirenena (KTP). Maro Dayak tonga mpanaraka ny Fivavahana Kristianina, satria rehefa be ny pasitera / mpisorona avy amin'ny Holandy fa maro niditra ny ala na dia nanorina fiangonana maro any anaty ala. Ny fiainan'ny mponina dia mifanaraka amin'ny natiora, satria araka ny toetsika dia afaka hijinja ny vokatra maharitra. Ao amin'ny taona 1970, na dia ny raiko dia miaramila, fa nanapa-kevitra ny hifindra an-trano tsy niakatra tafika sentosa II Balikpapan, alalan 'ny fanorenana ny trano teo amoron-dranomasina any Kampung Baru Central, Balikpapan, mahagaga raha isika sekelurga efa manana mpiray tam-po enina olona (ampai fisotroan-dronono, Ny rainy dimy lahy, dimy vavy) raha toa ka afa-jaza kajy amin'ny intelo, dia reniko niteraka an'i (manan-janaka 13). Koa raiko ny hanao trano dingana lehibe, izay eo ambanin'ny ranomasina eo ambanin'ny trano dia rehefa ny ranomasina). Dia WC / kabine / kabine avy hatrany iza na iza miditra amin'ny ranomasina. Mazava raha tsy nisy fandrindrana fiainam-pianakaviana (KB), dia toy izany ny ankizy rehetra afaka feno vary sakafo tamin'ny toerany. Amin'izao fotoana izao mbola kely ny mponina eo an-toerana miaraka fialam-boly mandany fotoana miaraka berenamg sy lakana teny sambo kely teo amoron-dranomasina tsara ao ambadiky ny trano. Ny Kdang jono, ka nahafaka foza no maro ao amin'ny indray ny trano. Amin'ny fotoana rehetra izahay amin'ny namana pedaling sambo ny manodidina vinany Wayne sy renirano Somber amin'ny vaovao vohitra farany, dia isika menjaing foza sy isan-karazany ny karazana, ao anatin'izany ny oran-dranomasina sy ny sifotra honko (letaha honko) izay betsaka azo jerena ao amin'ny manodidina ny ala honko rehefa mbola mandravaka nanaraka ny morontsirak'i ny Hoalan'i Balikpapan. Tamin'ny 1990 rehefa niverina teto amin'ity tany ity (araka ny fianakavianay Nifindra tany Jakarta tamin'ny fiandohan'ny 1973) fotsiny mba hitsidika havana fianakaviana izay mbola monina ao London, no nahitanay ny morontsirak'i Balikpapan matetika nahita fako plastika sy ny fako hafa noho ny shimika. Suli hoy mpanjono eo an-toerana fa ho hita intsony karazan-trondro maro, foza, makamba (oran-dranomasina) sy ny sifotra ao amoron-tsiraka Balikpapan honko, afa-tsy rava honko, tora-pasika amoron-tsiraka dia tercenar fako isan-karazany. Koa isika tsy nahita intsony Daulu rajako be mihantona amin'ny hazo miaraka amin'ny ambany ny manokana eo ambony, anisan'izany ny Python efa sarotra hita. Orang-utan afaka mbola ho hita amin'ny fahababoana Orang utan tao amin'ny ony wayn foana fikambanana izay mitantana ny Orang Utan. Ary ny nosy Borneo intsony ankamaroan'ny efa nampiasaina efitra, izao htannya maro no may mba ho soloina asa diloilo drofia fambolena, ary ny fizotran'ny ny renirano rano fihenan'ny, satria ny asa hazo mba mandray orana rano eo anoloany mikoriana any amin'ny ony nanomboka hanjavona, fitiavam-bola olombelona toekarena izay misokatra toeram-pambolena menaka ny fandoroana ny ala, izay niafara tamin'ny Indonezia amin'izao fotoana izao toe-javatra tafiditra amin'ny vonjy taitra setroka Indonezianina doro ala tranga afaka Samai 1997 (BBC) doro ala sy ny tany tany Indonezia tamin'ny 1997 hektara nahatratra an-tapitrisany. Hatraiza sy ny ara-toekarena fiantraikan'ny doro ala sy tany amin'ny faritany maro ao Indonezia dia tena azo inoana ny mitovy ny maridrefy ny zava-nitranga toy izany koa tamin'ny 1997, araka ny mpikaroka. Amin'ny alalan'ny fanaraha-maso, Robert Field hanombana tany sy ny doro ala izay namely an'i Indonezia amin'ity taona ity dia tena mafy. Field, ny Columbia University mpikaroka izay mitarika fianarany teny amin'ny Goddard Institute for Space Fianarana Space Agency ny United States, dia mino fa ny zava-misy ao Indonezia dia mety ho sarotra kokoa raha mitohy ny hain-tany ho toy ny vokatry ny El Nino tranga. "Ny toe-javatra any Singapore sy Sumatra no lalana nanatona ny atsimoatsinanan'i ampahany 1997. Raha ny toetr'andro maina vanim-potoana maharitra intsony, dia azo heverina fa ny 2015 no ho voasoratra ho toy ny ratsy indrindra zava-nitranga ao amin'ny firaketana an-tsoratra," hoy Fields dia naka teny toy ny hoe ny AFP masoivohom-baovao. Ao amin'ny vanim-potoana 1997-1998, ny governemanta Indoneziana milaza fa ny habetsahan'ny tany izay kosa dia mankahatra ny afo nahatratra 750.000 hektara. Na izany aza, ny tontolo iainana isan-karazany sampan-draharaha toy ny Forum ny Tontolo Iainana (WALHI) Tombanan'ny nahatratra ny isa 13 tapitrisa hektara. Avy eo mianatra ny National Development Planning Agency nanao miaraka amin'ny Azia Banky Fampandrosoana (ADB) milaza fa ny habetsahan'ny fiantraikany amin'ny afo tany nahatratra 9,75 tapitrisa hektara. Momba ny ara-toekarena fiantraikan'ny, ny habetsaky ny vinavina miovaova. Toe-karena sy ny tontolo iainana Programme ho Azia Atsimo-Atsinanana Indonezia dia maminany ny ratsy fanahy izay nampijaly US $ 5 lavitrisa ny $ 6 lavitrisa ho toy ny vokatry ny tany sy ny doro ala tamin'ny 1997-1998. Avy eo, Bappenas sy ny fianarana ADB ao ny fahaverezan 'ny US $ 4,861, mitovy amin'ny Rp711 tapitrisa tapitrisa. Indonezia fatiantoka ara-toekarena noho ny afo sy ny setroka amin'ny 1997 ranged avy amin'ny $ 4 lavitrisa ny $ 9 lavitrisa. Tontolo iainana ny niatrika an'izany Herry Purnomo, fikarohana Institute for International Center ala Research (CIFOR), koa milaza tany sy ny doro ala nitovy taona ity ny firaketana an-tsoratra ao amin'ny 1997. "Ny tranga an'i El Nino amin'ity taona ity dia kely kelikely kokoa raha oharina amin'ny 1997. Na izany aza, ny niatrika an'izany ny tontolo iainana mora kokoa ny doro ala satria efa natao toy ny tsinontsinona ny indostria sy ny menaka voanio fambolena," hoy Herrera tamin'i BBC Indonezia, Jerome Wirawan. Herrera tsy hanapaka ny mety fa ny ara-toekarena fiantraikan'ny ala sy ny tany ny afo tamin'ity taona ity mety mitovy ny firaketana an-tsoratra 1997. "Ny faritanin'i Rp20 tapitrisa tapitrisa ihany no afaka very noho ny afo. Eny ary, ankehitriny misy faritany dimy, fara fahakeliny, no niharan'ny mafy, izany hoe Riau, Jambi, Atsimo Sumatra, West Kalimantan, sy Afovoany Kalimantan, "hoy Herrera. Araka ny heviny, ny lanjan'ny ny very tsy kajy fotsiny ihany ny tsy ampy afo kitay. "Nisy nanakorontana asa ara-toekarena, izay nisy fiantraikany ny fahasalamam-bahoaka, ny rano simba, fitaterana, sy ny hafa," hoy Herrera. Ao anatin'ny resadresaka miaraka amin'ny BBC Indonezia, Lohan'ny Data Information sy Public Fifandraisana-pirenena Loza Management Agency (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, hoy ny ara-toekarena setroka fiantraikan'ny loza izay nitranga tany amin'ny faritany maro ao Indonezia tamin'ny 2015 afaka mihoatra ny 20 tapitrisa tapitrisa. Izany isa, dia hoy izy: mifototra amin'ny tahirin-kevitra tamin'ny taona lasa. Izany no nambara fa ny fahaverezana noho ny zavona tamin'ny 2014, kajy ny telo volana tamin'ny Febroary ho Aprily ihany faritanin'i Riau nahatratra Rp20 tapitrisa tapitrisa. Faritany telo nametraka ny vonjy taitra valinteny ASAP Tany sy ny doro ala izay mahatonga ny zavon-tsetroka lasa hetsika fanao isan-taona tsy tapaka. Nisisika ny governemanta Indoneziana tsy nanaiky nanolotra fanampiana roa firenena manodidina, Singapore sy Malezia, izay nandritra ny taona maro koa fiantraikany zavon-tsetroka avy amin'ny doro ala sy ny tany tany Indonezia. Ao amin'ny tafatafa BBC, ny Filoha Joko Widodo hoy Indonezia dia manao ezaka lehibe, amin'ny alalan'ny naparitaka an'arivony mpikambana ao amin'ny tafika sy ny polisy ary koa ny am-polony maro ny helikoptera mba handresy. Joko Widodo hoy ny Filoha mila telo taona mba hamita ny asa ara-batana mba hampitsahatra ny setroka. "Izany dia midika hoe isika efa nanentana izy rehetra mba hiatrehana, fa mitaky fotoana izao. Tombanan'ny telo taona aho manao asa ara-batana, "hoy Jokowi nilaza tamin'ny BBC ny Karishma Vaswani. Raha ny minisitry ny Ala sy ny Tontolo iainana, Siti Nurbaya, dia hazavao ny karazana fanampiana izay Singapore manana hanatitra toy izany koa ny an'i Indonezia, ny Chinook angidimby, mba hanampy ny fahanginan'ny. Fa ny isan'ny iray tarika ihany. Satria mponina mba hitsidika ny tobim-pahasalamana dia avo ampy ambony mifandray amin'ny taovam-pisefoana sy ny taratasy mivalona aretina amin'ny atahorana taona dia zaza, dia naka ny tanàna ho an'ny famoahana lapan'ny governemanta. Helda Suryani "Izy (Singapore) ihany no manome fiaramanidina iray, ka raha tsy ngasihnya 20 takela-bato na 30," hoy Siti. State ny vonjy taitra Miisa telo faritany, izany hoe Riau, Jambi sy Afovoany Kalimantan dia nametraka ny toerana misy hamehana rehefa afaka herinandro ny tondro ny fahalotoan'ny rivotra ao amin'ny faritra mampidi-doza any an-dafin'ny dingana. Ny Alarobia 30 Septambra, ny mpanondro mandoto ao Pekanbaru, Riau -according ny kajy Haitoetrandro, Climatology, ary Geofisika- hahatratra 100 450 na ambony kokoa noho ny haavon'ny loza. Desi dia toe-javatra mampalahelo, ny renin'ny iray taona iray zaza izay tsaboina any amin'ny hopitaly any Pekanbaru, Riau, satria nijaly ny havokavoka aretina. Aretina dia mainka manasaro ny zavona matevina ny farany volana vitsivitsy. "Anaka efa ao an-trano, tsy mandeha na aiza na aiza noho ny setroka. Mbola tany nifandray tamin'ny aretina havokavoka. Nahoana no tsy ny governemanta manao na inona na inona? Nahoana no hiandry mandra-maty ny zanakay, satria ny setroka rehetra? "Dia hoy izy. Lehiben'ny Medical Mpiandraikitra tao an-tanàna ny Pekanbaru, Drg. Helda Suryani, nilaza fa efa dingana isan-karazany, anisan'izany ny manome ny efitrano amin'ny rihana fahatelo ny birao no ben'ny tanàna trano Pekanbaru toy ny toerana ho an'ny zaza vao teraka famoahana hatramin'ny enim-bolana monja. Ny efitrano ankehitriny nipetrahan'ny ankizy efatra, vehivavy bevohoka, ary ny ray aman-dreny telo chaperones. Ny Alarobia (30/09), ny mpanondro mandoto ao Pekanbaru, Riau, araka ny kajy Haitoetrandro, Climatology, ary Geophysics hahatratra 100 450 na ambony kokoa noho ny haavon'ny loza. "Amin'ny maha olom-pirenena ny fitsidihana ny tobim-pahasalamana dia avo ampy ambony mifandray amin'ny taovam-pisefoana sy ny taratasy mivalona aretina amin'ny taona atahorana ny zaza, dia nahafaka ny tanàna lapan'ny governemanta hiala," hoy Helda nilaza mpanao gazety ao Pekanbaru, Sari Indriati. Fanesorana ireo faritra setroka heverin'ny zava-dehibe ny Azisman Saad, manam-pahaizana manokana ao amin'ny Pekanbaru havokavoka. Na izany aza, araka ny azy, raha ny famoahana atao ao amin'ny faritra iray ihany, dia tsy ho mahomby. "Raha famoahana ao Pekanbaru koa, mihevitra aho fa ny tsy mahomby. Satria Pekanbaru no rakotry ny setroka, "hoy Azisman. Iza no 'mpilalao' ambadiky ny fandoroana ny ala sy ny tany? Mitarika ny vondrona tsirairay fialan-tsiny manao asa tany dia hahazo ny isan-jaton'ny fidiram-bola azy manokana. Misy anjara tokony ho 20 mpilalao tany an-tsaha sy hahazo tombontsoa ara-toekarena avy amin'ny doro ala sy ny tany. Ny ankamaroan'ny ny sela ny tombontsoa ara-toekarena, ary handray soa avy amin'ny mpandray anjara dia sarotra ho an'ny asa fampiharana ny lalàna. Asa governemanta hanagadra na fitsarana ny olona sy ny orinasa ahiahiana amin'ny fandoroana ny tany dia tsy ho ampy mba tsy miverimberina setroka. Ny zava-misy sy ny hevitra voalaza ao amin'ny fikarohana amin'ny 'The Politika fitantanam-Tany sy ny doro ala' ny mpikaroka Center for Iraisam-pirenena Fikarohana ala (CIFOR) Herry Purnomo. Pitsiny any an-tsaha, araka ny Herrera, mitranga satria ireo mpanao ratsy burners ala, na ny fiaraha-monina sy ny afovoany sy ny orinasa fampianarana mandrakariva hifandray amin'ny olona mahery, na tany amin'ny distrika,-pirenena, ary na dia hatreo amin'ny haavon'ny ASEAN. Herry fianarana Purnomo hita fa ny vidin'ny tany no nanala ny fandoroana dia hiara-hitsangana ho vonona ny fambolena menaka voanio. "Tsy mora ho an'ny governora izay hitaky (mirehitra hazo), dia mety ho izay manana (zaridaina) menaka voanio, doro ala, mifandray amin'ny manokana antoko izay mahery ao amin'ny faritra, ka ny Regent na governora dia tsy mora loatra (hanao zavatra), dia tsy maintsy hahita ny ara-politika atonton-kintan'i "Herry tamin'ny BBC Indonezia, Wednesday (23/9). Ireo mpilalao, mifototra amin'ny ny fikarohana, miasa ho toy ny endrika "voalamina heloka bevava". Misy vondrona izay hanatanteraka asa samy hafa, toy ny tany fitarainana, mandamina tantsaha izay slashing na fanapahana, na may, mandra-barotra ekipa sy ny tanàna momba ny manam-pahefana. Nefa tsy tao amin'ny foibe anivon'ny, ny tompony mety ho havana ny mponina, ny orinasa ny mpiasa, mpiasa ao amin'ny distrika, ny mpandraharaha, na ny fitaovana-ambaratonga mpampiasa vola avy any Jakarta, Bogor, na Surabaya. Voalamina Ny vondrona tsirairay mitarika tany fialan-tsiny manao asa dia hahazo ny isan-jato ny fidiram-bola ihany, fa eo ho eo, ny solaitrabe ny tantsaha vondrona nandray ny lehibe indrindra anjara ny fidiram-bola, eo amin'ny 51% -57%, raha vondrona ny tantsaha slashing, manapaka, ary ny fandoroana mahazo ny ampahany amin'ny vola miditra eo amin'ny 2 % -14%. Ao amin'ny fikarohana, Herry nahita fa ny vidin'ny tany no nanala noho ny fialan-tsiny manao an-tsaha ny nateriny ny vidin'ny Rp 8.6 tapitrisa isaky ny hekitara. Na izany aza, tany amin'ny 'vonona ny fambolena ", na efa may fa hitombo ny vidiny, izany hoe isaky ny hekitara Rp11.2 tapitrisa. Ary telo taona tatỳ aoriana, taorian'ny efa nambolena tany vonona ny vokatra, mpamboly dia efa toy izany azo amidy amin'ny vidin'ny Rp40 tapitrisa isaky ny hekitara. Image copyrightGETTY IMAGES Image fanazavana Tompon-tany fandoroana mety ho ny tanàn-dehibe na ny havany ny mponina, distrika mpiasa, ny mpikaroka. Ny fitomboan'ny lanjan'ny ny ara-toekarena ny tany no mahatonga ny mpilalao, izay nitady ny soa avy amin'ny tany sy ny doro ala mitranga foana. Ankoatra izany, ny fomba ny nividy sy nivarotra tany, tany fiomanana dia andraikitry ny ny mpividy, raha ho may na diovina tery. Ny mora vidy kokoa ny vola lany ny fanadiovana, tsara vintana mpividy mbola ho lehibe lavitra. Ny fampitahana, araka ny Herrera, isaky ny hekitara dorana vola lany $ 10-20, raha ny tany no nanadio tery mitaky $ 200 isaky ny hekitara. Herry fandinihana natao amin'ny 11 toerana ao amin'ny distrika efatra ao Riau, izany hoe Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai sy Bengkalis mampiasa sarintany, fandrefesana, ary ny fomba politika. Ao Riau, misy 60 menaka voanio fambolena sy ny fambolena hazo orinasa 26. Political mpividy Orinasa na ny olona ao amin'ny faritra izay tonga ny tompon'ny toeram-pambolena menaka palmie ao amin'ny faritra afaka mahita mpividy ara-politika eo an-toerana. Herrera nanamarika hoe: "Aoka hatao hoe misy orinasa madinika izay manana mpiaro matanjaka indrindra antoko politika ao amin'ny distrika izay misy fiantraikany ny fizotry ny fanapahan-kevitra sy ny fampiharana eo amin'ny faritra. Fa angamba fa matanjaka mpanohana ny am-perinasa." Players amin'ny ambaratonga kafa na 'barons', Herrera nahita, mety ho na iza na iza. "Avy ny olona manam-pahefana, polisy, miaramila, ny mpikaroka, azo anjara, afaka manana hatramin'ny jatony hektara ny voanio sy palmie ao amin'ny dingan'ny fandrosoana afaka (atao) mandoro mba handray ny manaraka fotoan'ny orana," hoy izy. Mpilalao izany na tratran'ny illegible ho fianarana ny fampiharana ny lalàna mitranga ankehitriny mba hiatrehana ny setroka. Mba hahitana izany, dia zava-dehibe ny mamantatra izay vokatry ny menaka voanio avy amin'ny toeram-pambolena no channeled. Solika tany Manohitra ireo zavatra hitan'ny, mpitondra tenin'ny Fikambanan'ny Indoneziana ny Palm Oil Association (GAPKI), Tofan Mahdi, hoy misy menaka voanio 2500 orinasa kely sy saranga antonony, ary ny fitambarany misy afa-tsy 635 orinasa izay mpikambana GAPKI. Zavona tany Riau dia mitranga ho 18 taona farany. "Izany koa ny mpikambana mino aho fa tsy (mirehitra ny tany), satria mifehy miakatra sy midina. Ivelan'ny mpikambana GAPKI, dia tsy manana ny fitaovana na zavatra mahaliana, fa mamporisika, manohana izay efa natolotra noho ny governora Atsimo Kalimantan ohatra, ka dia (solika orinasa madinika sy mpanelanelana amin'ny tontolo solika) ho mpikambana GAPKI mba hifehy moramora kokoa, "hoy izy. Na izany aza, Tofan hiaiky fa tsy nanana fomba hentitra amin'ny fanaraha-maso ny ambany. "Fa GAPKI manana fitsipika, manana zavatra takiana, manaraka ny fitsipika araka ny fitsipika tao amin'ny foibe, eo an-toerana sy isam-paritra," hoy izy. Ankoatra izany, ny Riau Polisy dia nametraka PT Inti Langgam grefy koa mpikambana GAPKI toy miahiahy doro ala. Ezaka fampiharana ny lalàna izay hatreto tsy nokasihina izy mpividy ara-politika, izay miaro ny orinasa na ny tompon'ny tany may. Edi Saputra, tantsaha ao Ogan Ogan Ilir, Sumatra Atsimo nilaza fa ny fampiharana ny fandoroana ny tany dia efa mandeha ao amin'ny fiaraha-monina nandritra ny taonjato maro. Fa ny fomba fanao tsy nanatanteraka ny isan-taona, matetika 5-10 taona monja izay mifanojo amin'ny vanim-potoana ny fambolena. "Manana jatony taona mba hodorana, fa nahoana isika no Fuss izao momba ny setroka, izany hoe, nahoana no toa afo mahery vaika? Satria ny handefitra dia omena ny orinasa, ka ny tany ka flammable. Tany orinasa izay ny ieritreretana, tsy azo ambolena amin'ny vary . Ary noho ny teo aloha, lavitra tokoa, raha voarangotra toerana misy ny afo, mivantana mandoro ny tany, "hoy izy. Sazy doro ala: Nahoana no orinasa lehibe 'tsy mikasika'? 23 Septambra 2015 Ny ankamaroan'ny orinasa ala incendiary efa nitory, fa ny dingana no masiaka Tontolo iainana mpikatroka ao Riau mankasitraka sazy ny orinasa mifandray amin'ny tany sy ny doro ala tany Sumatra, fa hanontany ny antony maro ambony orinasa 'tsy mikasika'. Coalition manara-maso fandripahana ala ao Riau nanao hoe: ny governemanta koa dia afaka manome arakaraka izany sazy mba hitondra ny raharaha amin'ny fitsarana sy mitaky ny orinasa mba handoa onitra ho any ny olona voan'ny ny setroka. "Ny fanomezana ny sazy ireo dingana iray haingana kokoa, tena mampanantena. Kanefa, ho hitantsika raha dingana toy izany koa dia ho entina hiala ao amin'ny orinasa lehibe izay tsikaritra sy voarakitra afo sy ny afo za-draharaha isan-taona amin'ny faritra namelan'i," hoy ny mpikatroka mafàna fo fiaraha-mitantana no manara-maso ny fandringanana ala (Eyes eo amin'ny ala) ao amin'ny faritanin'i Riau, Afdhal Mahyuddin, nilaza BBC Indonezia, Heyder Affan, Wednesday (09/23) maraina. Aloha, efa-toko ao Sumatra sazy avy amin'ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy ny Ala (KLHK) mifandray amin'ny tany sy ny doro ala. Orinasa izay fahazoan-dalana dia mihantona PT LIH (Riau), PT TPR (South Sumatra) sy PT WAJ (South Sumatra), raha PT HSL (Riau) fahazoan-dalana efa foanana intsony. Ny orinasa dia tsy maintsy manome afo fisorohana fitaovana Ny orinasa dia tsy maintsy hitsahatra asa rehetra tany an-tsaha sy ny hihaona ny adidy, toy ny afo fisorohana fitaovana famenony. Izany sazy ity hetsika vaovao mifototra asa manokana hery (Satgasus) Minisitry ny Tontolo iainana sy ny ala. Izy ireo amin'izao fotoana izao dia efa nitsidika 286 toerana may tany Sumatra sy Kalimantan. Pay onitra Afdhal Mahyuddin koa nilaza fa tsy Gaga loatra fa ny governemanta dia nivaingana ny alalana PT LIH. "Satria, tamin'ny 2013, ary avy eo, dia efa tonga olona ahiana ka mandraka ankehitriny untried," hoy Afdal. Toy izany koa, Afdal dia tsy gaga loatra, rehefa foanana intsony ny fitondrana ny raharaha fahazoan-dalana ny PT HSL ao Riau. "Mazava, araka ny efa ela no tsy mavitrika," hoy izy nanampy. Na izany aza, dia nanampy, ny governemanta dia tokony ho afaka manome sazy toy izany, na arakaraka izany, manohitra orinasa lehibe hafa izay manao toy izany nandritra ny taona maro ny fandikan-dalàna. "Mariho isika, dia misy orinasa maro ny fandikan-dalàna voalaza handefitra. Mahagaga, dia tsy azo foanana intsony na sazy," hoy Afdal. Mpikatroka mihevitra, orinasa lehibe maro izay mandalo incendiary ala "Heveriko fa mila hetsika manohitra goavana orinasa na ny ambony," hoy izy nanampy. Nanolo-kevitra ihany koa izy, ny sazy izay tokony ampiharina fotsiny ny fampiatoana na fisintonana ny fahazoan-dalana ny fandidiana, toy ny mitondra ny raharaha any amin'ny fitsarana heloka bevava na sivily. "Koa izy ireo tsy maintsy mandoa onitra ho an'ny fiaraha-monina voakasiky be noho ny zavon-tsetroka," hoy izy koa. Amin'izao fotoana izao, ny ekipa 286 nitsidika toerana KLHK nandoro any Sumatra sy Kalimantan. Koa, dia hoy izy: KLHK hoy ny orinasa nampiato ny fahazoan-dalana dia hamita ny fotodrafitrasa dia mbola ho tanteraka mba hampihenana ny mety ho an'ny afo. Matin'ny hatsiaka dia fisintonana ny fahazoan-dalana fiantraikany raha ny orinasa no hita fa meloka amin'ny fitsarana, hoy ny manam-pahefana KLHK. Zarao vaovao ity momba ny amin ' "Inona no miandry ny governemanta ho an'ny ankizy maty noho ny mifoka sigara?" Tao amin'ny efitrano no fitaovana rivotra regulator amin'ny rihana fahatelo City Hall Pekanbaru, Apriyani mijery efa-bolana-antitra zaza, natory soundly. Ny 35 taona vehivavy dia iray amin'ireo efatra reny izay efa nialoka fikarakarana zaza ny vonjy taitra nanome tanàna Pekanbaru governemanta. Izany no ezaka mba hiarovana ny zaza amin'ny setroka misy poizina toy ny vokatry ny tany sy ny doro ala izay efa miseho nandritra ny volana maro. "Indro, ny zazakely malalaka ny setroka. Tsy toy ny ao an-trano," hoy Apriyani. 'Rehefa hijanona ao an-trano, ny zazakely dia mikohaka foana. Raha eto, ny birao mikatona, ary misy rivotra purifiers. Ny fahalotoan'ny rivotra ao Pekanbaru voasoratra tamin'ny 1000 olo mandoto Standard Index (PSI). Na dia 100 PSI irery no sokajiana ho mahasalama, ary raha mihoatra ny 300 no heverina mampidi-doza. "Zazakely izay mijaly ny tena. Io ihany no foana zaza mikohaka" Tsy misy zaza fandriana no nohofana, sy oksizenina cylinders, fa Afriyani mengaakan izy fa tsy te-hijanona any ho ela. "Iriko ny governemanta mba hiasa mafy kokoa mba hanafoanana ny setroka, ka ny zanakay aza manahirana niaina fotoana rehetra. Satria ratsy noho ny fahasalamany, sa tsy izany? Dr. Helda Suryani, lehiben'ny sampan-draharaha ny fahasalamana ao Pekanbaru hoy ny fialofana dia natokana indrindra ho an'ny fianakaviana mahantra tsy mba misy mpanampy. "Ny manan-karena dia manana ny famerana mari-pana, ary afaka mahita ny tenany ho toerana azo antoka kokoa. Raha ity fitoerana ity ho an'ireo izay trano hitantsika isan'andro manimba feno setroka. Rehefa nanontaniana ny antony ela taorian'ny governemanta vaovao mba hanome fialofana, dia nihomehy Feno hadrohadro ny fanamarihan'i. "Nahoana no ela? Efa nivavaka izahay ny orana, ary rehefa tonga ny miaramila mba hanampy, madio rivotra nandritra ny roa andro. Fa ankehitriny eto indray. Koa dia ho toy izany mandrakizay." Raha ny Desi, ny fialofana tara loatra. Ity reny mbola tanora nipetraka niaraka tamin'ny iray taona teo amin'ny hopitaly ny Santa Maria. Izy no voan'ny aretina iray havokavoka. "I mitandrina ny zaza an-trano ny fotoana rehetra. Tsy handeha izahay na aiza na aiza izany noho ny setroka, fa ny zanako mbola nifandray tamin'ny pnemonia." "Nahoana no tsy ny governemanta manao na inona na inona?" dia nanontany "Moa ny governemanta miandry ho an'ny ankizy maty noho ny mifoka sigara?" (BBC)